Ahoana ny fomba fanesorana pejy amin'ny PDF miaraka amin'ireto fitaovana maimaim-poana ireto | Famoronana an-tserasera
Alao an-tsaina hoe vao avy nanao PDF ho an'ny mpanjifa manana teti-bola, miaraka amina tetikasa… Ary tampoka dia niantso anao izy alohan'ny nandefasana azy tany aminy ary nilaza taminao fa misy fiovana. Midika izany fa tokony hofafana ny takelaka iray na roa amin'ny PDF. Fa, Ahoana ny fanesorana ny pejy amin'ny PDF raha tsy anananao ny rakitra voalohany?
Mety hitranga izany, ary miatrika safidy roa ianao: na averinao ilay rakitra, mandany ora sy ora maro anaovana azy indray; na mampiasa pejy na programa manampy anao hamafa pejy iray amin'ny PDF nefa tsy mila manao zavatra hafa ary afaka minitra vitsy. Manintona anao kokoa ve io hevitra io? Mariho tsara fa hampianarinay hanesorana mora foana ireo pejy amin'ny PDF ianao.
1 Maninona no esorina ny pejy amin'ny PDF?
2 Ahoana ny fomba fanesorana pejy amin'ny PDF
2.3 Famaoana pejy PDF
2.4 Fitaovana PDFill
Maninona no esorina ny pejy amin'ny PDF?
Raha ny mahazatra, rehefa manamboatra PDF ianao dia tsy manangana azy mivantana amin'ity endrika ity fa mampiasa tonian-dahatsoratra hamorona ilay rakitra ary vita indray, fa tsy mitahiry azy ao anaty dok na fanitarana mitovy amin'izany dia ataonao anaty PDF.
El Ny olana amin'ny PDF dia ny mijery ny antontan-taratasy amin'ny solosaina maro ny programa misy. fa tsy azonao atao ny manitsy azy, mamafa ny ampahany, mampiditra sary na, toy ny amin'ity tranga ity, esory ny pejy amin'ny PDF. Ary olana izany.
Rehefa mila mamerina manao io antontan-taratasy io ianao, na rehefa mila manova azy dia mila fanaraha-maso feno ny zava-drehetra ao anatiny ianao, satria mety ho voatery manala pejy tsy miasa intsony ianao, na lasa lany andro .
Izany no antony maha-zava-dehibe ny fananana programa na fitaovana satria, raha tsy izany, ary raha tsy navitrika ianao ary nitahiry kopia tao amin'ny dokotera na mitovy amin'io antontan-taratasy io dia tsy maintsy ataonao indray izany avy eo am-boalohany (na mampiasa PDF ka hampiova fo ireo dokotera , na dia mamoaka ny antontan-taratasy aza izy ireo).
Ahoana ny fomba fanesorana pejy amin'ny PDF
Ankehitriny rehefa azonao ny antony tokony hahalalanao fitaovana hanalana pejy amin'ny PDF, tonga ny fotoana hiresahantsika safidy maromaro azonao dinihina. Ny tsara indrindra dia izay andramo ny vahaolana sasany Izay noresahinay hatrizay dia ity no ahitanao ilay mety indrindra amin'ny tsironao na ilay manome anao ny valiny tsara indrindra.
Ny safidy voalohany omenay anao dia ny Adobe Acrobat. Ary eny, tsy maimaim-poana izany fa tianay ny hametraka azy io satria manana fotoam-pitsarana maimaim-poana izy io, ary mety ho fotoana mety indrindra hampiasana azy io rehefa nanana izany tsy fahombiazana izany ianao ary tsy manana ilay voalohany. Ho fanampin'izay, izy no fitaovana tsara indrindra hiasa miaraka amin'ny PDF ary raha azonao ampiasaina izy io mba hanesorana ireo pejy amin'ny PDF mora foana tsy mikasika ny sisa amin'ny antontan-taratasy, tsara kokoa.
Mba hanaovana izany dia ampidino ny programa ary ampandino ny fitsapana maimaimpoana. Manaraka, sokafy ny programa ary sokafy ny rakitra PDF avy amin'ny toerana misy anao.
Tsindrio ny haantsary pejy. Ho eo amin'ny tsanganana ankavia izy io fa, raha tsy miseho kosa izy dia kitiho ny sary kely View-Show / Hide-Navigation.
Tsindrio ny bokotra Ctrl. Ankehitriny, amin'ny totozy, safidio izay pejy tianao esorina. Ary farany, eo an-tampon'ny zana-tsary dia kitiho ny Delete.
Ary ho vita ny zava-drehetra. Tsy maintsy hitahiry ny antontan-taratasy fotsiny ianao ary ho afaka hanana ny valiny amin'ny fanesorana ireo pejy ireo.
Ity misy programa hafa azonao ampiasaina hanala pejy mora amin'ny PDF. Raha ny tena izy, Tsy vitan'ny mamafa ny pejy fotsiny izy io, fa afaka manova lahatsoratra, manova azy, manambatra azy, mizara PDF ... Noho izany dia iray amin'ireo fitaovana feno indrindra misy izy io.
Tadidio izao fa ao amin'ny Windows ihany no azonao ampiasana azy. Tsy misy amin'ny rafi-piasana hafa izy io.
Famaoana pejy PDF
Fitaovana iray izay mandeha tsara amin'ny olana sedrainay, izay manala pejy amin'ny PDF, dia ity. Esory mora foana ny pejy tsy ilaina satria mampiseho anao ireo pejy izy ireo ary tsy mila misafidy ireo tianao hofoanana fotsiny ianao mba hanesorana azy ireo amin'ilay rakitra.
Ity dia mety ho iray amin'ireo fandaharana mahomby indrindra, indrindra raha tsy maintsy mamafa pejy maro ianao ary mila mijery azy ireo alohan'ny tsy misy lesoka ary mamafa zavatra izay tsy tokony ho hitanao.
Fitaovana iray hafa hanesorana pejy avy amin'ny PDF ity iray ity, izay tsy vitan'ny hoe mamafa ny pejy fotsiny fa mandamina indray ireo pejy ary mizara ny PDF. Mamela anao mihitsy aza mamorona tsoratadidy ary esory ny pejy ho fisie fisarahana (raha sanatria tsy tianao ho very ireo pejy izay hofafanao).
Amin'ity tranga ity dia tsy tena programa izay horesahintsika fa tranonkala iray izay hanampy anao hanala pejy mora foana amin'ny PDF. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mankany amin'ny tranokala ianao ary tsindrio ny fizarana PDF Split, izay manapaka pdf.
Ianao no mila ampidiro amin'ny sehatra misy azy ireo (Raha tena zava-dehibe izany ary misy angona manokana, dia tokony hampiasa fomba hafa ianao satria eto dia tsy voafehinao intsony ny antontan-taratasy ary tsy fantatrao izay mety hitranga). Raha vantany vao azonao izany, dia hanolotra anao maso ny pejy rehetra ao amin'ilay rakitra ny tranonkala. Ankehitriny, mila misafidy fotsiny ireo pejy tianao hotanana ianao ary avelao ireo izay hofafanao tsy misy marika. Vantany vao vita ianao dia mila tsindrio Split PDF fotsiny! ary afaka segondra vitsy dia hisy PDF vaovao hisintona azy ary hanamarina raha nahavita azy tsara ianao.
Amin'ny tsy mikasika ny PDF, ny valiny alainao dia tokony hitovy amin'ny tany am-boalohany afa-tsy ny tsy fisian'ireo pejy nofafanao ireo. Fa ny zavatra hafa rehetra dia tokony hijanona amin'ny toerana iray ihany.
Araka ny hitanao dia misy fitaovana maro azonao ampiasaina hanalana pejy amin'ny PDF. Fa ny zavatra tsara indrindra, indrindra raha mitranga matetika izany dia, rehefa mitahiry ilay rakitra dia ataonao amin'ny endrika rakitra sy amin'ny PDF. Amin'izany dia afaka mamaha ny olana haingana kokoa ianao ary hanana "fiarovana" amin'izay mety hitranga amin'ny PDF, na raha mila manova ianao amin'ny ho avy (fotoana fohy na lavitra).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Ahoana ny fomba fanesorana pejy amin'ny PDF miaraka amin'ireo fitaovana maimaimpoana ireo